10 Iindawo ezigqibeleleyo zokuba Snorkeling eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eIceland > 10 Iindawo ezigqibeleleyo zokuba Snorkeling eYurophu
Ii-Orchins zoLwandle, iilwandle, imibala yezilwanyana eqaqambileyo, kwaye amanye amanzi acocekileyo emhlabeni, snorkeling kwezi 10 iindawo ziindawo ezonwabisa ngengqondo. le 10 ezona ndawo zibalaseleyo zokuloba ngeempumlo eYurophu, unokubonakala okumangalisayo kwi 20 m. phantsi kwamanzi, kwaye likhaya kolunye lwezona zilwanyana zinomdla emhlabeni.
1. Eyona ndawo ifanelekileyo yokuSebenzisa i-Snorkeling e-UK: Devon
Ukusuka kwisiqithi esinamatye ukuya kwiLondon Bridge, kuMantla eTor Bay, Apha uya kufumana enye yezona ndawo zintle ze-snorkeling e-UK. I-Jewel anemones kuluhlu olupinki kunye nephuzi, iimbaza, kunye neentlanzi ezizodwa zentlanzi, unokuchitha usuku lonke nge-snorkeling eLondon Bridge.
Iindwendwe ezininzi eziya e-UK nase-Devon zisenokungazi nokuba zihamba ziye kwenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuthambisa i-snorkeling eYurophu. kunjalo, IDevon yindawo emnandi yokuntywila emanzini kunye nokuntywila e-UK. Ukongeza kwiLondon Bridge, Isiqithi saseLundy sesinye isiqwenga somdaka, ngamatywina angwevu, ijellyfish yenyanga, namahlengesi ukubona.
2. Eyona ndawo ifanelekileyo yeSnorkeling ePortugal: IBerlenga enkulu
IPortugal idume ngamanxweme ayo amangalisayo, Isiqithi saseBerlenga Grande asikho njalo. nje 10 km ukusuka ePeniche, enye ye 10 eyona ndawo intle yokuntywila eYurophu, IBerlenga sisiqithi esihle. Iqukethe 3 iziqithi ezincinci zemiqolomba, Amanzi amnyama aluhlaza, nokwaphukelwa yinqanawa.
Kwimeko apho ubuzibuza, ungakonwabela ukwaphuka kwenqanawa enezixhobo zokuhamba ngesikhephe. Ngaphezu, Ihlabathi elimangalisayo laseAtlantic elingaphantsi kwamanzi lezidalwa zaselwandle njenge-sunfish, iikorale, izakulinda ngaphaya kwemaski. I-Fort San Juan Bautista yakudala ejonge le ndawo intle iya kuba semehlweni akho njengoko usenyuka, ukongeza imfihlelo kumava onke.
3. IPaki yeSizwe yePort Cros, Fransi
Ukuya kubunzulu be 8 m. kwindlela ekhethekileyo ye-snorkel, ungancoma amakhulu eentlanzi ePort Cros Ipaki yelizwe. Le marina indala Ugcino lwendalo yenye yezona ndawo zintle zokwenza i-snorkeling eYurophu. I-Plage de la Palud yindawo efanelekileyo yokuqala i-adventure yakho ye-snorkeling.
Ngokuchasene nezinye iindawo ezimangalisayo zokuntywila kulwandle kolu luhlu, apha uya kufumana 6 Iiboys ezinolwazi ezinomdla kunye nezidalwa zolwandle odibana nazo: Isinxibo se-East Peacock, ikepeji epeyintiweyo, amaqela anqabileyo edusky, kunye nezinye iintlanzi ezininzi ezimibalabala.
4. La Silfra, Ayisilend
Enye ye ezona ndawo zokuntywila zibalaseleyo emhlabeni, kuyacaca ukuba iLa Silfra yindawo entle yokuloba i-snorkeling eYurophu. Ukuqubha phakathi 2 Amazwekazi aseYurophu, nosapho, okanye abahlobo, emanzini inyibilika kwiLangjokull glacier, ngamava angenakulibaleka.
I-Silfra yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuhamba ngesikebhe emhlabeni, ngenxa yokubonakala okumangalisayo kwi 100 m. Imibala engaphantsi kwamanzi, ukuqubha phakathi kweendledlana ezinamatye kunye noontaba, kwaye bonke obu buqaqawuli yiyure nje enye ukusuka eReykjavik. Kuba amanzi athanda ukubanda kakhulu, Kuya kufuneka ubhukishe ukhenketho lwe-snorkeling, ngesuti yokuqubha efanelekileyo kunye nezixhobo zokugcina ushushu.
5. Isiqithi esiBomvu, eSardinia, ElamaTaliyane
Cacisa amanzi acocekileyo kufuneka ukuba ube namava amangalisayo e-snorkeling. U-Isola Rossa eSardinia uneemeko ezilungileyo zokuzonwabisa nge-snorkeling: amanzi acwengileyo, umhlaba onamatye nemiqolomba, Ubomi basemarina obuza kuvuthuza ingqondo yakho, kunye namanxweme amhlophe anesanti ukuze ubambe umphefumlo wakho, phakathi kweeseshoni ze-snorkeling.
Uya kufumana ilali yabalobi abancinci, UIsola Rossa eMntla-Ntshona weSardinia. Amakhorali, fish, kwaye amatye abomvu ayindawo efanelekileyo yeholide yehlobo. Ukongeza kwi-sunbathing, ungonwabela imidlalo yezamanzi, ukudayiva emanzini, kunye nokubhudlwa ngumoya kunxweme lwase-Itali. ke, Qiniseka ukuba upakisha iibhegi ezingangeni manzi, kunye nekhamera engaphantsi kwamanzi ukukhumbula umhlaba ongaphantsi kwamanzi weSardinia.
6. ICabrera Archipelago National Park, Speyin
19 iziqithi ezincinci zidibanisa iziqithi zeCabrera, ikhaya lezinto eziphilayo zolwandle, engafundwanga ngabantu. Umqolomba oluhlaza, Indawo yolondolozo lwaselwandle yenye yezona zityebileyo eYurophu, nakohambo lwe-snorkeling, uya kufumanisa ngaphezulu kwe 500 iintlobo. Scorpionfish, oopopus, Ufudo olubuyela emva, zimbalwa zezidalwa zolwandle oza kudibana nazo.
Ngaphezu, ungafumana ithuba elimangalisayo lokubona amahlengesi esikhepheni, kwindlela yakho eya eCabrera. Unxweme lwaseSpain yenye yezona ndawo zidumileyo zasehlotyeni eYurophu, kwaye iMallorca yindawo ephuphayo yolwandle kubakhenkethi abavela kwihlabathi liphela. ke, pakisha iimpahla zakho zokuqubha kunye ne-snorkel, uhambo olungalibalekiyo kunye nokuphumla eChabrera.
7. IWalchensee Ichibi laseMunich
Kakhulu, luhlaza, kwaye nzulu, Lake IWalchensee yindawo entle yeAlpine Lake eJamani. 75 KM evela eMunich, le ndawo yokufikela snorkeling ikwi iziko lommandla waseBavaria. ke, njengoko usiza emoyeni kwaye uphumle, i izimvo ezintle ezikungqongileyo bonelela esona siseko sisolileyo samava kaThixo.
Ngokubonakala okukhulu kwi-5m ukuya kwi-20m, Lake UWalchensee yenye ye 10 ezona ndawo ze-snorkeling eYurophu. Ngaphezu, ungaphonononga nzulu nangaphezulu kweemvula kunye ne-eels, echibini lamanzi acwengileyo, njengoko uhamba ngokuntywila kwiLake Walchensee.
8. Umlambo i-Snorkeling e-Austria: IViecht Am Traunfall
Ngelixa uninzi lwabantu lukuxelela ukubhukuda nge-snorkeling kuLwandle lweMeditera ngamava amangalisayo, umlambo snorkeling uyamangalisa. Amanzi aluhlaza amdaka, kwiAustria ephezulu, IViecht am Traunfall yeyona ndawo ilungileyo ye-snorkeling e-Austria. IViecht am Traunfall yikhaya leekorale ezintle, nakohambo lwakho lokuya kwezi nzwakazi, uyakumenywa ukuba utsiba-tsiba kwaye wenze imiwonyo.
ngoko ke, i-snorkeling kwiiAlps zaseOstriya yenye yezona zinto zinomdla kakhulu eYurophu. Nje ukuba ugqibezele uhambo lwakho lokuya emanzini, iinduli eziluhlaza kunye neembono zomlambo zezi ipikniki efanelekileyo kunye nendawo yokuphumla. Apha, ungajonga kwakhona izithonga ezimangalisayo zangaphantsi kwamanzi ozifumeneyo, kwaye uyonwabele umoya omtsha weentaba kwiLizwe lase-Austrian.
9. Iziqithi zaseMede Spain
Iziqithi zaseMede ziyinxalenye yolondolozo lwendalo oluhle del Montgri. Ifunyanwa kwindawo yokugqibela yasehlotyeni eSpanish, ICosta Brava, amaMedi likhaya lobomi obunomtsalane elwandle. Ukuba unomdla kubomi baselwandle, emva koko snorkeling apha, ayilibaleki.
Iziqithana ezisixhenxe zamaMedi, kunxweme lwaseCatalonia, ejikelezwe luLwandle lweMeditera ebandayo yiparadesi yokuntywila emanzini. Inyaniso, i-snorkeling eMedes yenye yezona zinto ziphambili ekufuneka uzenzile ngelixa ukhefu eCosta Brava. Ngenxa yabantwana, abahlobo, okanye uwedwa, amaMedi likhaya lezilwanyana ezintle, iilwandle, iinkwenkwezi zolwandle, kunye nee-barracudas.
10. Iindawo ezigqibeleleyo zokuba Snorkeling eYurophu: Elba Italy
Iigorgoni ezibomvu kwelinye icala, iikorale ezibomvu nezimnyama kwelinye icala lonxweme, Elba yiparadesi. I-bay yase-Sant Andrea kwisiqithi sase-Elba yilapho iqala khona nayiphi na into ephantsi kwamanzi. Kude kwizibuko nakwindlela ehamba phambili, ubomi baselwandle kwesi siqithi saseTuscan buyamangalisa.
Ukongeza kwiikorale ezintle, fish, nezilwanyana, Unxweme lwase-Italiya lolona lubalaseleyo emhlabeni. ke, ukuba ufuna ukubamba umphefumlo wakho phakathi komqolomba ohlola kunye nokukhangela i-sunfish, ke amanxweme ase-Elba ayindawo yokuphumla efanelekileyo.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo olungalibalekiyo kwihlabathi elimangalisayo elingaphantsi kwamanzi kwezi 10 iindawo kakhulu snorkeling eYurophu ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "1o Iindawo eziPhambili zeSnorkeling eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fbest-places-snorkeling-europe%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ubomi baselwandle IindawoForSnorkeling Snorkeling I-SnorkelinginEurope Ubomi bangaphantsi kwamanzi